မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်းမှာပဲ ရှိတဲ့ သနပ်ခါးကို လိမ်းခွင့်ရတာဂုဏ်ယူနေတဲ့ မော်ဒယ်လ်မင်းသားလေး ပိုင်တံခွန် – Myanmar Update News
မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်းမှာပဲ ရှိတဲ့ သနပ်ခါးကို လိမ်းခွင့်ရတာဂုဏ်ယူနေတဲ့ မော်ဒယ်လ်မင်းသားလေး ပိုင်တံခွန်
August 6, 2020news uptodate0 Comments
မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်းမှာပဲ ရှိတဲ့ သနပ်ခါးကို လိမ်းခွင့်ရတာဂုဏ်ယူနေတဲ့ ပိုင်တံခွန်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မော်ဒယ်လ်မင်းသားချော ပိုင်တံခွန်ကတော့ အချိန်တိုအတွင်းမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို များစွာရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါ။ ပိုင်တံခွန်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမက အာရှနိုင်ငံကမိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကျော်လည်း ဖြစ်လို့နေတာပါ။
ဒီလို အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့ ပိုင်တံခွန်ကတော့ ခေတ်ပေါ်အမိုက်စား အပြင်အဆင်တွေနဲ့ စတိုင်ကျနေသလို မြန်မာဆန်ဆန် ဝတ်ဆင်ဖို့ကိုလည်း မမေ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ဒီနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ မြန်မာဆန်ဆန် လုံချည်နဲ့အကျီကို ဝတ်ဆင်ထားပြီး သနပ်ခါးကိုလည်း လိမ်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာ့သနပ်ခါးကို This is called Myanmar Tha Nat Kha which only exists in our country, Myanmar. ဆိုပြီးတော့လည်း ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ရေးသားထားသေးတဲ့အပြင် အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေကိုလည်း ” ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ခင်မျာဟုတ်တယ် မြန်မာသနပ်ခါးကို တခြားသော နိုင်ငံက လူတွေ ကို ကြွားချင်လို့ပါ” ဆိုပြီးတော့လည်း ရေးသားထားပါသေးတယ်။
ပိုင်တံခွန်ကတော့ မကြာသေးခင်ကလည်း မိဘတွေကို အိမ်နဲ့ကားကို လက်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချီးကျူးစကားကို များစွာရရှိခဲ့တာပါ။
ပိုင်တံခွန်ကတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာလည်းအနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ခွင့်ရကာအောင်မြင်နေသလို ပြည်တွင်းမှာလည်း နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်နေသလိုလည်း မိဘကျေးဇူးသိတတ်ကာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်း မမေ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် တကယ့်ကိုလေးစားစရာပါပဲနော်…Source : PaingTakhon
မွနျမာနိုငျငံတဈနိုငျငံတညျးမှာပဲ ရှိတဲ့ သနပျခါးကို လိမျးခှငျ့ရတာဂုဏျယူနတေဲ့ ပိုငျတံခှနျ
မွနျမာနိုငျငံရဲ့ မျောဒယျလျမငျးသားခြော ပိုငျတံခှနျကတော့ အခြိနျတိုအတှငျးမှာ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကို မြားစှာရရှိထားသူတဈယောကျပါ။ ပိုငျတံခှနျကတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာသာမက အာရှနိုငျငံကမိနျးကလေးပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးကြျောလညျး ဖွဈလို့နတောပါ။
ဒီလို အောငျမွငျမှုတှရေရှိနတေဲ့ ပိုငျတံခှနျကတော့ ခတျေပျေါအမိုကျစား အပွငျအဆငျတှနေဲ့ စတိုငျကနြသေလို မွနျမာဆနျဆနျ ဝတျဆငျဖို့ကိုလညျး မမတေဲ့သူတဈယောကျပါ။ ဒီနမှေ့ာတော့သူ့ရဲ့ဖဘှေ့တျချမှာ မွနျမာဆနျဆနျ လုံခညျြနဲ့အကြီကို ဝတျဆငျထားပွီး သနပျခါးကိုလညျး လိမျးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ မွနျမာ့သနပျခါးကို This is called Myanmar Tha Nat Kha which only exists in our country, Myanmar. ဆိုပွီးတော့လညျး ဂုဏျယူစှာနဲ့ရေးသားထားသေးတဲ့အပွငျ အားပေးတဲ့ ပရိသတျတှကေိုလညျး ” ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ ခငျမြာဟုတျတယျ မွနျမာသနပျခါးကို တခွားသော နိုငျငံက လူတှေ ကို ကွှားခငျြလို့ပါ” ဆိုပွီးတော့လညျး ရေးသားထားပါသေးတယျ။
ပိုငျတံခှနျကတော့ မကွာသေးခငျကလညျး မိဘတှကေို အိမျနဲ့ကားကို လကျဆောငျအဖွဈနဲ့ ပေးခဲ့တာဖွဈပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ ခြီးကြူ စကားကို မြားစှာရရှိခဲ့တာပါ။
ပိုငျတံခှနျကတော့ နိုငျငံရပျခွားမှာလညျးအနုပညာအလုပျတှလေုပျခှငျ့ရကာအောငျမွငျနသေလို ပွညျတှငျးမှာလညျး နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ အသညျးစှဲ တဈယောကျဖွဈပါတယျ။အောငျမွငျနသေလိုလညျး မိဘကြေးဇူးသိတတျကာ မွနျမာ့ယဉျကြေးမှုကိုလညျး မမတေဲ့သူတဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့ တကယျ့ကိုလေးစားစရာပါပဲနျော…Source : PaingTakhon